टोखा ह’त्याका’ण्डबारे भयो यस्तो नयाँ खुलासा — Sanchar Kendra
१वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस
२सर्वोच्चकाे बहसमा खैलाबैला मच्चिएपछि ओली सरकारले रातारात गर्यो यस्तो किर्ते काम, अब के गर्लान प्रधानन्यायाधिस जबरा ?
३महान्यायाधिवक्ता खरेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र इजलासमा पेस
४सवारी साधनको नयाँ लाइसेन्स बनाउन चाहनेहरुलाई खुसीको खबर, हट्यो कोटा प्रणाली
५प्रचण्ड-नेपाल समूहको आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन, क-कसले गर्दैछन सम्बोधन ?
६बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै, मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने
७खुलेको केहि दिनमै बन्द भए विद्यालयहरु, सामाजिक विकास मन्त्रीले गरे यस्तो अपील
८अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कति पाउनेछन् तलब, कस्ता हुनेछन् सुविधा-भत्ता ?
९२५ वर्षीय समृत खरेलले सर्वोच्चमा गरेकाे १५ मिनेट लामाे बहस सुनेर न्यायाधिश दंग, किन मागियाे लिखित भर्सन ?
१०ओलीले पत्रकारलाई झपार्दै भने- तिमि हैन, तपाई लेख्नुहोस
११सुवास नेम्वाङ र अग्निप्रसाद खरेलको भिडियो प्रमाणका रूपमा पेस गर्न तयार छु- भट्टराई
१२ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकाल्ने घोषणा
९ओली सरकारले गर्यो फेरि जनता रुवाउने यस्तो निर्णय, राति १२ बजेबाट लागु हुने
टोखा ह’त्याका’ण्डबारे भयो यस्तो नयाँ खुलासा
काठमाडौँ । काठमाडौंको टोखारोडस्थित ग्राण्डी हस्पिटल नजिकैको भिल्लामा रहेको १ बेडरुमको अपार्टमेण्टमा शुक्रबार श्रीमान र श्रीमतीको वि’भ’त्स शव फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार,श्रीमानको क्ष’तवि’क्षत टाउको हेर्दा उनलाई चाँहि मारेको अर्थात् ह’त्या गरिएकै भन्नेमा कुनै शंका छैन । मसला पिस्ने सिलौटामा रगत ल’त’पतिएको छ र सिलौटामा पुरुषको कपाल पनि टाँसिएको छ ।
शवको प्रकृति हेर्दा ‘गोलभेँडाको अचार पिस्ने सिलौटाले हानेर श्रीमानको टाउकोलाई नै अचार बनाइएको’ देखिन्छ । झ’ण्डै तीन केजीको सिलौटाले हा’नेको कारण पुरुषको टाउकोबाट गिदीसमेत ओछ्यानमा छरपष्ट भएको देखिन्छ । तर,श्रीमती चाँहि झु’ण्डि’एर पासो लगाई मरेको अवस्थामा थिइन् ।
प्रहरीले श्रीमतीलाई पनि कसैले मारेर झु’ण्डा’इएको हो कि भन्ने आशंका समेत गरेको छ । त्यसको लागि प्रमाण खोज्दै त्यतापट्टि पनि अनुसन्धान थाल्ने बताइएको छ । तर,अहिलेलाई यहि हो भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोत भन्छ ‘हामी अनुसन्धानको सबै पाटोबाट हेर्दैछौं ।’ किचेन पछाडिको ढोका खुल्ला रहेको सम्बन्धमा पनि प्रहरीले नजिकबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मृतक महिलाकी दिदीका अनुसार बुधबारसम्म बहिनी र ज्वाईं सम्पर्कमा नै थिए,त्यसपछि सम्पर्क नभएको हो । मृतक महिलाको माइती र दिदीको घर नजिकैको ग्रिनल्याण्ड चोकमा छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि कुनैपनि सम्पर्कमा नरहेपछि दिदी बहिनीलाई भेट्न शुक्रबार बिहान त्यहाँ पुगेकी थिइन् । दिदीले प्रहरीलाई बताएअनुसार ‘पछाडिको ढोकाबाट जाँदाजाँदै बहिनी झु’ण्डि’एको देखेँ ।’ तर प्रहरीलाई त्यस्तो विभ’त्स ह’त्याको खबरचाँहि ढिलो गरिएको थियो ।
बिहान ९ बजेको हाराहारीमा खुल्ला रहेको पछाडिको जाली ढोकाबाट छिर्दा बहिनीको झु’ण्डिएको ला’श र बेडमा ज्वाईंको वि’भत्स अवस्था देखेपछि दिदी हिँड्दै माइतीमा गएर आमालाई भनेकी थिइन् । त्यसपछि अमेरिकामा रहेका आफन्तलाई खबर गरेको दिदीले प्रहरीलाई बताएकी छिन् ।
त्यत्रो विभत्स हत्या र घटनाको खबर प्रहरीलाई साँझमा मात्र गर्नुले घटनालाई रहस्यमय बनाइदिएको हो । टाउकोबाट गिदी बाहिर निस्किएकाले पुुरुषको लाश शुक्रबार साँझ नै गन्हाएको अवस्थामा थियो । तर,श्रीमतीको लाश भने गन्हाएको थिएन ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट श्रीमतीले आवेशमा श्रीमानलाई मारेर आफैँ झु’ण्डिएको नै देखिए पनि पछाडिको ढोका खुल्ला भएकोले घटनालाई यसै हो भन्न नसकिने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
श्रीमान र श्रीमती मारिएको घटनाको अन्तर ८ देखि १० घण्टा जति थियो । टाउकोबाट गिदी आउने गरी हानिएपनि पुरुषको शरीरमा अन्त कुुनैपनि किसिमको डाम नदेखिएको बताइन्छ । दुवैले अन्तिम अवस्थामा बच्ने कोशिस र संघर्ष गरेको कुनै संकेतसमेत नदेखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार बानेश्वर घर भएका मृतक ३३ वर्षका उमेश केसी घर ज्वाईं बसेका थिए । त्यसैले उनी आफ्नो घर बानेश्वरतिरको आउजाउ नै बन्द गरेका हुन् ।
सन् २०१४ मा बिहे गरेर ससुरालीबाटै अमेरिका गएका उनी आईटीका विद्यार्थी थिए । गत दशैंमा काठमाडौं आएपछि भिल्लाभित्रको १ बेडरुम अपार्टमा बस्न थाले । उनको एक सातामै अमेरिका फर्कने कार्यक्रम थियो ।
प्राप्त प्रारम्भिक जानकारीमा श्रीमती सुदीक्षा गिरीले मलाई पनि अमेरिका लैजानुपर्छ भनेकी थिइन् । त्यहि क्रममा भर्खरै ग्रीन कार्डप्राप्त श्रीमानले पनि अमेरिकाबाट पठाएको त्यत्रो पैसा खोई भनेर सोधपुछ गरेपछि आवेशमा घटना भएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ । सात वर्षदेखि केटो उता अमेरिकामा एक्लै बसेको र श्रीमती पनि यता त्यसैगरी बसेपछि त्यहि विषयले समेत मनमुटाव बढाएको हुनसक्ने अर्को कोणबाट पनि प्रहरीले विश्लेषण थालेको छ ।
तर,रकम र कारोबारको बारेमा भने अहिले नै यकिन छैन । बिबाह गरेको ७ वर्षसम्म श्रीमतीलाई अमेरिका लैजाने वा श्रीमतीले अमेरिका जाने प्रक्रियासमेत शुरु गरेको देखिँदैन । श्रीमान् केसी र महिला गिरी परिवारको भएकै कारण केटोको घरतर्फ आउजाउ नभएको बताइन्छ । जनआस्थाबाट
नेपाल प्रहरीले ओली सरकारसँग किन माग्यो १२ अर्ब रुपैयाँ, यस्तो छ कारण
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीले बल्ल निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष, बालुवाटारदेखि सितलनिवाससम हलचल
ओलीलाई आयो ३ दिने अल्टिमेटम
भारतले नेपालमाथि लगायो फेरि यस्तो प्रतिबन्ध, नेपाली जनता मा’रमा पर्ने निश्चित
बिहे गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बाहिरियो विवाहको मिति, को हुन् दुलही ?
किन ढिलाइ हुँदैछ संसद विघटनको मुद्दामा ?
पत्रकार सम्मेलन गरेरै मन्त्रीस्तरीय बैठकअघि भारतले किन भयो यस्तो ? के गर्न खोज्दैछन मोदी ?
नेताहरूको गिरफ्तारी र जेलनेलले पार्टीलाई कमजोर होइन स्पातिलो बनाउँछ: विप्लव